पौराणिक भण्डारमा विशिष्टतम् स्थान छ, शिव महापुराणको । अठार महापुराणमा गणनाको हिसाबले चौथो स्थानमा पर्छ यो पुराण । ब्रह्म महापुराण प्रथम र ब्रह्माण्ड महापुराण अन्तिम मानिएका छन्, यिनमा । यसको अर्थ महत्त्वको हिसावले पनि चौथो स्थानमै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन र भन्न पनि हुँदैन । कसारको कुन बोक्रा कुन गुदी ! सारमा सबै बोक्रा सबै गुदी । सबै पुराणको महत्त्व उत्तिकै छ आ–आफ्नो स्थानमा ।
पुराणहरू पुराणपुरुषोत्तम भगवान्को अंगविग्र मानिएका छन्, यसै पनि । यस अर्थमा पनि सबै पुराण समान हैसियतका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ । शिरको काम शिरले गर्छ, पाउको काम पाउले गर्छ । न आँखाको काम कानले गर्न सक्छ, न कानको काम आँखाले गर्न सक्छ । हो, कलेबरको हिसाबले साना र ठूला जरुर छन् । जहाँसम्म शिवमहापुराणको कुरा छ कलेबरको हिसावले पनि ठूलो मध्येकै मान्नुपर्छ ।
खासगरी पुराणहरूका पाँच उद्देश्य हुन्छन्, भनिएका छन् पौराणिक ग्रन्थहरूमा । आदि सृष्टिको व्याख्या, पुनःश्रृष्टिको विवेचन, मन्वन्तर कथन, मानव वंश र वंशानुचरित वर्णन नै हुन् तिनका उद्देश्य भनेका ।
यिनै विषयका सेरोफेरोमा घुमेका छन्, पुराणहरू । यद्यपि पुराणका उद्देश्य दशवटा हुन्छन् भन्ने उल्लेख पनि नभेटिने होइन कतैकतै ।
श्रीमद्भागवत महापुराण र ब्रह्मवैवर्त महापुराणमा यसको कथन भेटिन्छ खासगरी । तथापि ती सबै एक अर्कामा अनुस्युत रहेकाले मूलतः पुराणहरूका उद्देश्य पाँचवटै हुन्छन् भन्ने मत प्रबलरूपमा अगाडि आएका छन् । शिवमहापुराणमा पनि यी सबैको सम्यक विवेचन भएका छन् ।
सात खण्ड छन् शिवमहापुराणका, जसलाई संहिता भनिन्छ । यिनमा विद्यासंहिता, रुद्रसंहिता, शतरुद्रसंहिता, कोटीरुद्रसंहिता, उमासंहिता, कैलाशसंहिता र वायवीयसंहिता रहेका छन्, क्रमशः ।
यीमध्ये दोस्रो खण्ड रुद्रसंहिताको पाँच उपखण्ड रहेका छन्, जसमा सृष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड र युद्धखण्ड रहेका छन् । अन्तिम खण्ड वायवीय संहिताको दुई उपखण्ड छन्, जसमा पूर्व वायवीयखण्ड र उत्तर वायवीयखण्ड पर्छन् ।
शिवमहापुराण नामबाटै प्रष्ट छ शैवपरक महापुराण हो । सृष्टिमा भगवान् शिवको स्थान, मान र विशेषता वर्णन गर्नु यस महापुराणको उद्देश्य हो । यसको अर्थ साम्प्रदायिक सिद्धान्त बोकेको महापुराण हो भन्ने होइन । प्रसङ्ग अनुसार वैष्णव, शाक्त, गाणपत र सौर सबै सम्प्रदायको विवेचन पनि उत्तिकै महत्वका साथ भएका छन् । यस अर्थमा भन्नुपर्दा साम्प्रदायिक सद्भावले युक्त महापुराण हो भन्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ।
कतै विष्णु, कतै शिव, कतै शक्ति, कतै गणेश र कतै सूर्यलाई प्रधान शक्ति मानिएको छ, पुराणहरूमा । एउटा प्रधान र अन्य सहायक शक्ति भएर रहेका हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा । यसै अनुरूप शिवमहापुराणमा शिवलाई प्रधान र अन्य देवतालाई उनका सहायकको रूपमा विवेचना भएको छ, तर उल्लेख छ जरुर सबैको ।
कुनै विषयवस्तु वा वर्ण्य विषयको आधारमा, कुनै प्रश्नोत्तरकर्ताको नामको आधारमा नामकरण भएका छन्, महापुराणहरूको । तिनमा विषयवस्तुको आधारमा नामकरण भएको महापुराणमा पर्छ, शिवमहापुराण ।
शुरूदेखि अन्त्यसम्म भगवान् शिव नै केन्द्रवर्ती भएर रहेका छन्, यस पुराणमा । यस अनुसार सृष्टिपूर्व पनि शिव नै थिए र महाप्रलय पश्चात् पनि शिवतत्व नै बाँकी रहन्छन् । सृष्टिकर्ता पनि उनै हुन्, प्रलयकर्ता पनि उनै हुन् र स्थिति व्यवस्थापनमा पनि उनकै सर्वोपरि भूमिका देखिन्छ । यिनै कुरालाई अनेक दृष्टान्त तथा कथोपकथनद्वारा प्रस्ट पार्ने काम गरेको छ यस महापुराणले ।
विषयवस्तुको उठान पनि नैमिषारण्य क्षेत्रबाट भएको छ र समापन पनि त्यहीँ भएको छ यस पुराणको । यद्यपि धर्म क्षेत्रमा जम्मा भएका ऋषिहरूले धर्मस्थापनसम्बन्धी प्रश्न गरे भनिएको छ, शुरूमा । जहाँ धर्मको काम र कुरा हुन्छ त्यही नै धर्मक्षेत्र हो । धर्मको चर्चा नैमिषारण्य क्षेत्रमै हुने गरेकाले यसले पनि त्यतै संकेत गरेको प्रस्टै अनुभूत गर्न सकिन्छ । प्रधान प्रश्नोत्तरकर्ता शौनकादि ऋषिहरू रहेका छन् भने उत्तर दिने काम सूतानामा पौराणिकले गरेका छन् प्रायः अन्य महापुराणहरूमा जस्तै ।
पुराणहरू संस्कृत भाषामा लेखिएकाले संस्कृतेतर पाठकलाई केही असहज हुँदै आएको पक्कै हो पुराणको विषयवस्तु बोध गर्ने मामिलामा । यद्यपि केही समय अघिदेखि हिन्दीमा अनुवाद गर्ने क्रम चल्दै नआएको होइन । तथापि नेपाली भाषी पाठकका तिर्खा खासै मेट्न सकेका थिएनन् तिनले, तर हाल आएर त्यो समस्या पनि टरेको छ ।
जयतु संस्कृतम्का वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री पोखरेलले अठारवटै महापुराणको नेपाली भाषामा अध्यायगत सारांश लेखिसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश प्रकाशित भइसकेका छन् । यसैभित्र पर्छ, शिवमहापुराण पनि । यसलाई प्रकाशित गर्ने काम बाबुराम पन्थले गरेका हुन् । वितरणको अभिभारा भने उद्धमकुमार घिमिरे, विश्व स्वतन्त्र सञ्चार, काठमाडौं नेपालले लिएको छ । बाँकी पनि प्रकाशनको क्रममा रहेको बुझिएको छ ।
यस अर्थमा अनुवादक, प्रकाशक तथा वितरक साधुवादका पात्र भएका छन्, भन्नैपर्छ, जसले महापुराणप्रति चासो राख्ने पाठकको प्यास मेट्ने जमर्को गरेका छन् ।
यद्यपि अनुवाद अध्यायगत सारांश भएकाले पुराणको समग्र विषयवस्तु बोध गराउन सक्षम छन्, भन्न नमिल्ला । विस्तृत जानकारीका लागि मूल ग्रन्थकै अध्ययन आवश्यक हुन सक्छ । तथापि चासो जगाउने काम भने पक्कै गरेका छन्, यिनले । अनुवादको आशय पनि यही रहेको बुझिन्छ, भूमिका खण्डबाट ।